Telo andro taty aoriana: hita ny fatin’ireo olona roa lasan’ny ranotrambo | NewsMada
Par Taratra sur 23/01/2021
Hita avokoa (omaly sy afakomaly) ny fatin’ireo olona roa tsy hita popoka nentin’ny ranotranombo niaraka tamin’ilay fiara 4×4 teo amin’ny pont Namakia. Tao amin’ny sera­nan’ny orinasa iray mpamokatra sira ao Antsahampano, Antsiranana II no nahitana ny razana…
Tamin’ny fotoana nahalasa ny rano ilay fiara 4×4 no nanomboka ny fikarohana nataon’ny miaramila avy ao amin’ny RM7, ny 2Bima ary ny avy ao amin’ny Bana ireo olona roa lasan’ny rano. Nahitam-bokany ny ezaka nataon’izy ireo ka hita ihany ny fatin’ireo niharam-boina. Rehefa natao ny fanadihadiana rehetra, fantatra fa iray amin’ireo olona roa tao anatin’ilay fiara 4×4, nofaohin’ny ranotrambo ny talata 19 janoary 2021 lasa ilay tovolahy 27 taona hita voalohany afakomaly, teo amin’ny renirano Antomboka, Namakia raha avy any Antsiranana hi­hazo an’Andranovondro­nana, nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Eloïse. Olona efatra izy ireo no nandeha tamin’ilay fiara 4×4 kanjo rehefa tonga teo amin’io tetezana io, no­faohin’ny rano niakatra tampoka teo amin’ny tetezana. Nivadibadika nentin’ny rano ny fiara sy ireo olona tao anatiny. Avotra ihany ny olona roa, saingy efa naratra mafy raha tsy hita popoka kosa ny roa ka isan’izany ity mpamily hita faty ity.
Hita omaly koa ny
fatin’ilay renim-pianakaviana iray…
Nomarihin’ny fampitam-baovao eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena fa hita omaly koa ny fatin’ilay renim-pianakaviana iray isan’ireo tsy hita popoka niara-nokarohina amin’ity mpamily ity. Efa nalain’ny fianakaviany ny razana taorian’ny fanamarinana sy ny fizahana na­taon’ny dokotera teo anatrehan’ny zandary. Nifanome tanana tamin’ny fikarohana ny Tafika niaraka tamin’ireo fokonolona ao an-toerana. Tsiahivina fa efa nifarimbonan’ireo tompon’andraiki-panjakana any an-toerana ny fampakarana ilay fiara avy ao anaty rano sy ny famonjena ireo olona roa avotra tao anaty rano.
Namely mafy tamin’iny tapany avaratra iny i Eloïse ary namela takaitra goavana mialoha ny nivoahany an-dranomasina tany amin’ny faritr’i Melaky.